कथा : उज्ज्वली spacekhabar
कथा : उज्ज्वली
स्पेसखबर काठमाडौं, २१ असार
लेखक : गगनसिंह थापा ।
बेंसीबगरको खेतमा पण्डितनी आमा र उसकी आमा काम गर्न जाँदा उनीहरु पनि जान्थे । बेंसीबगरको बालुवामा खेल्थे । नांगै भएर घाटमा नुहाउँथे । तातो बालुवामा छाती राखेर पल्टिन्थे । कहिलेकाहीं आफ्ना लुगाहरु बालुवामाथि ओछ्याउँथे । चिल्ला, मसिना, राम्रा ढुंगाहरुका छोराछोरी बनाउँथे । बीचमा ती छोराछोरीलाई सुताएर वरिपरि आमाबुबा भएर सुतिदिन्थे ।
एकदिन उदय 'म बाउ बन्छु, तिमी आमा !' भन्दै उज्ज्वलीको छातीमाथि पल्टियो । उसको गुप्तांग सारोसारो भएर ठडियो । उज्ज्वलीको गुप्तांगसँग त्यो जोडिन थाल्यो । अरु केही नभए पनि कस्तो-कस्तो अनौठो आनन्दानुभूतिको सरसराहट दुवैको शरीरमा दगुर्यो । एक-अर्कामा जोल्ठिरहूँजस्तो लागिरह्यो ।
यत्तिकैमा आमाहरु खाजा खान घाटको छेउमा आइपुगे । उनीहरुलाई जोल्ठिएर पल्टिरहेको देख्दा उहाँहरु दुवैजनाको मुस्के हाँसो खितखित हाँसोमा परिणत भयो । खितखित हाँस्दै उदयकी आमाले सोधिन्, 'यो के गरेको बाबु ?'
'आमा-बा भएर खेलेको !' उदयले बालसुलभ भाकामा सरल उत्तर दियो ।
'अनि, यी ढुंगाहरु बीचमा किन राखेको त ?' उज्ज्वलीकी आमाले सोधिन् ।
'यिनी हाम्रा छोराछोरी !' उदयले पनि सरल र छोटो उत्तर दियो ।
'अनि, यस्तो खेल कसले सिकायो त ?'
'राति सुतेको बेला हजुर र बा खेल्नुहुन्छ नि त्यस्तै खेल !'
पण्डितनी बज्यै अनुहार रातो बनाएर घोसेमुन्टो लगाउँदै भुइँमा हेर्न थालिन् ।
'अनि, हाम्रा बा-आमा नि खेल्छन् यस्तो खेल ! मैले नि देखेकी छु !' उज्ज्वलीले थपी ।
रातोपिरो हुने पालो अब उज्ज्वलीकी आमाको थियो ।
पण्डितनी बज्यै मुस्कुराउँदै भनिन्, 'यिनीहरुमा फटिङ्गले बाढ आयो !'
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २१, २०७६, ०२:३५:००